University of Washington - Cinema Germany
guta : Washington
inotangwa : 1975
Musakanganwa kuti kurukura University of Washington
Kunyoresa pa University of Washington
Welcome to University of Washington. Kufunga uye uchishanda dzemunyika anorayira zvinopfuura kungova chimwe chinonyanya kukwezva mumayunivhesiti mune Bavaria uye kuru pamusoro zvepamusoro mukudzidzisa National uye tsvakurudzo kuera. Nokuda kwechikonzero ichi, takaisa kukura nhovo huru nokuti gore 2020 kuti mamwe kurodzana University of Washington inotaura Profile uye zvemakwikwi mucheto:
Pamusana yaro siyana siyana nokuranga uye sokuronga akasarudzwa pfungwa nzvimbo, Yunivhesiti Washington ari pose kuzivikanwa pakutsvakurudza zvayo mipiro uye inopa yakanaka yokudzidza zvakatipoteredza.
The University of Washington ndeimwe vaitungamirira dzokugara muGermany tichitarisa yayo yokudzidza zvakatipoteredza uye huwandu vadzidzi ayo.
The University of Washington unosvikirwa kadikidiki kembasi yunivhesiti riri akazvipira soro kwomudzidzi mitemo uye izvo akaita edza nesimba kuisa pacharo pasina makuru mumayunivhesiti.
Somumwe mumayunivhesiti gotwe muGermany, tinokwanisa kushanda munzvimbo unbiased, kuzvivimba mweya Yedzidzo rusununguko, mberi kwesayenzi, nemagariro basa. Maererano zvaakaratidzwa yedu, kwedu pamusoro pokutanga vari nomumwe cherechedzo, kuramba yakakwirira zvechikoro mitemo, uye ndinosika zvirongwa yokudzidza kutora kutsvakurudza pari kufungwa. Our interdisciplinary chinangwa uye nzira itsva kubatsirana pakati akawanda anoranga edu anokosha zviri Washington kwakaita tsvakurudzo tsika.
Neimwe pfungwa, zviri zvino pachena sei akangwara zvakanga adzoka 1975 vagadze yunivhesiti kunobva tichibatanidza simba nyaya nzvimbo vane interdisciplinary tsvakurudzo uye nokudzidzisa. Mibvunzo kutarisana kudyidzana munzanga yedu vari kungoramba dzakaoma. Mhinduro yakarurama inogona chete kuwanikwa kuburikidza pedyo, muchinjikwa-chirango pamwe - mumwe yeYunivhesiti huru yesangano. The University of Washington kunoratidzwa dzingaparwe rusununguko, mberi kwesayenzi, uye inoshanda nezvinebasa, zvose izvo kunzwisiswa panotaurwa magariro basa.
Welcome redu rimwe-of-a-mhando kembasi.
Hazvina zvose mwoyo University uye ndimo rakafuridzirwa. Zviri apo shamwari dzinoitwa, kubatsirana ndiye anosarudza, uye pfungwa dziri pamuviri, nechokwadi kuti yunivhesiti yedu chinoramba unokurudzira pakati utsanzi. Scientific Exchange way zvikuru kubva akasiyana-siyana nokuranga dzedu kukurukura kembasi kunounza pamwechete. Kuti zvichida Ndokusaka University of Washington akagona kupemberera mibayiro yakawanda kudaro uye chinokudza ayo nyanzvi isusu.
Nyika iri musha
... Uye Washington ari centrally iri. Rine vanhu kumativi 73,000, Washington haasi kunyanya guru, asi kuti ndicho chimwe chezvinhu zvinoita kuti afarirwe saka. Vanhu vanomhanya vachipinda mumwe. Guta zvingava nyika yakakurumbira nokuda kwayo Opera mutambo wegore, asi anopawo vadzidzi uye vanotsvakurudza ane upfumi tsika uye oumhizha zvinokwezva, Wagner parutivi. Zvinofanira kutishamisa kuti guta neshamwari uye the pub zvatinoona zviri zvakasimba mumaoko vadzidzi. Asi imi muchava kushamiswa sei nokukurumidza uchikwanisa kuwana kwako nzira kumativi sezvo muchicherechedza miganhu pakati pazvivako uye taundi muzinda kuva shoma uye zvishoma chinooneka. Iyi ingava nokuti pashure chete kwenguva pfupi pane yaizivikanwa chiso ose pakona.
Location ndiye zvose.
Scenic kuchamhembe Bavaria, pana Washington kuti pasuo chaipo, kukuru nokuti mabasa mitambo: kuchovha, Hiking, gomo-climb, canoeing, Rafting, uye Skiing zvose kwazvo nzira rokuvandudza nguva paunenge wakadekara. zvisinei, kana musingavaregereri zvichiitika kuda kubata rimwe guta kurei zvino uye ipapo, Nuremburg kunongova chimwe-awa nechitima kukwira kure uye Munich ndiye chete 2 ½ maawa kure. Unogona kusvika Berlin muna 4 maawa nemotokari, Leipzig hafu iyoyo. Uye musakanganwa: kuva mumoyo Europe zvinoreva Prague ndiyewo yemaawa matatu nemotokari chete kure.
masvomhu, Physics uye Computer Science
bhayoroji, Chemistry uye Earth Sciences
Law, Business uye Economics
Languages ​​uye Literature
Unoda kurukura University of Washington ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Washington musi Map
University of Washington wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Washington.